Nzira yekuita sei ma Amazon mazvigadzirwa zvakanaka?
Kana ukashamisika kuti uchatengesa kuAmerica muna 2018, nyaya ino ichave inofadza iwe. Pano tichakurukura zvakavanzika zvekubudirira kuAmazon uye zvinhu zvichakuunzira purofiti. Uyezve, tichazopinda nematambudziko makuru nekutengesa kuAmazon kuti tibatsire kusaita zvikanganiso zvakafanana.
Nzira yekutsvakurudza mishonga yekupikira kutengesa kuAmazon?
Pasi pepamusoro pekutsvaga kwebhizimisi rako reAmazon, unoda kuwana michina inogona kunge inobatsira uye yakatengwa zvakanaka - peru travel package deals. Icho chiito chakakosha zvikuru chinoda nguva yako nekuedza. Nenzira yakanaka, Amazon inokupa zvakawanda zve data iwe uchida kutanga.
Chinhu chokutanga chaunofanira kuita ndechekuti chii chinoita kuti ichi kana icho icho chibatsire kwauri semutengesi. Iwe unofanirwa kupfuura nenzira dzakadai sekudhura kwekutumira, kukwidzwa kwemakemikari kukwikwidzana, kukwidziridzwa kwechikwata uye mufambiro wevatengi kune zvigadzirwa zvemukirasi. Sarudzo yako inofanira kusangana nematambudziko akawanda anotevera.
Izvi zvinotevera zvinoshandiswa uye zvinokanganisa zvichakubatsira kuita sarudzo yakasarudzika yakakodzera:
mari inofanira kusvika kusvika 35% yemutengo wako wekutengesa;
chinangwa chekutengesa mutengo pakati pe $ 10- $ 50;
kwete kunetseka kutumira pamusana pekudzivirira kwezvinhu (2-3 lbs. max);
zviri nani kuti zvinhu zvako zvisave zvisingagoneki uye zviri nyore kusunungura;
kudzivisa nguva yemwaka kana yezororo-zvigadzirwa zvavanenge vasina kukuunza iwe pachako gore rose;
zvipfeko zvako zvinofanira kusiyaniswa nepamusoro-soro uye zvakasiyana.
Pamusoro pezvose zvakakurukurwa pamusoro apa, unoda kuona kana chinhu chakanyanya kudiwa, kana kuti hachina kuwana nyasha pakati peva Amazon shoppers. Zvisinei, iwe unofanirwa kuve nechokwadi chokuti chigadzirwa hachina kunyanya kukwikwidzana sezvo chichideredza mikana yako yekumira kunze kwevanhu.
Zvimwe zvinokonzera zvinoratidza kudiwa kwechigadzirwa kuAmerica:
zvishandiso zvaunosarudza hazvifaniri kuregererwa nevatengi veAmazon kana kuti makambani makuru;
mimwe michina ine Amazon inotengesa zvakanyanya ye5000 kana yakaderera muboka guru;
yakafanana nemiti yakasarudzwa haisi yakakurumbira pakati pevashandisi;
kusavapo kwekugadziriswa kwemiti;
chinotarisirwa chigadzirwa chemashoko chinodarika makumi mapfumbamwe ekutsvaga kwemwedzi.
Pamutambo wechipiri wekutsvakurudza kwako kwemusika, unofanirwa kutarisa ruzivo pamapeji ekugadzirwa kwezvinhu zvakabatana. Mutengo wekushandisa unogona kukuudza zvakawanda pamusoro pehuwandu hwehuwandu hwezvibereko uye zvikomborero. Kana uzarura peji yezvigadzirwa zveAmazambique peji, teerera kutengo, kutengesa mari, chigadzirwa chemitengo, kutakura mutoro, uye Amazon bestseller rank. Kunyanya kukoshesa kunofanira kubhadharwa kuvhidhiyo yevashandi nekuongorora uye nyeredzi. Nhamba uye hutano hwechigadzirwa zvinogadzirwa zvinoratidza mhinduro yomushandi pane chimwe chinhu uye mukurumbira wake.
Amai Best Best Sellers angakubatsira sei kuita sarudzo yakachenjera?
Amazon Best Seller rank is a list of TOP 100 sold items in all categories. Iyi nhamba yehurongwa inogona kusiyana zuva nezuva. Kana iwe uri mukugadzirisa kusarudza zvinhu zvinokosha kutengesa kuAmazon, chikamu ichi chichava chinonakidza kuti iwe utarise. Kubva peji ino, unogona kudonhera muTAT 100 zvakanakisa kutengesa kune mamwe mazvikamu uye masheji. Iyi dheta inogona kuve yakakosha nokuda kwekushandisa kwekutsvakurudza kwemitambo yako.
Kutsvaga kuburikidza neAll Best Seller list, iwe unofanirwa kujekesa pane zvikamu zvakatevera:
Chikamu ichi chinoratidza mishonga inofambisa yakave yakakurumbira uye yakatengwa kwenguva yekupedzisira. Iyi dhesi yakabva ku Amazon product listing vatsvakurudzi uye analytics. Pano unogona kudonhera pasi kuti uone Hot Hot Inoshandiswa mune zvikamu zvakasiyana uye masheji. Ngwarira kuti data iyi inogona kuchinjwa nekufamba kwenguva.
Chikwata ichi chinokuratidza zvinhu zvinokurumidzira kutamira mu Best Seller Rank mumarudzi ose. Sezvo mutemo, unosanganisira kupisa kunotyisa uye kutengeswa kwemwaka. Izvi zvinokodzera kunyatsotariswa sezvavanenge vachizivikanwa uye vachivimbisa, asi vachiri kwete kukwikwidzana. Uyezve, iyi inogona kuva yakakosha yekuwana zvinhu zvakatsva niche.
Pano iwe unoda zvinhu zvakashata zvikuru pa Amazon. Mune mamwe mazwi, Amazon vanotengesa vanochengetedza zvinhu izvi mukuda kwavo mazita. Icho haritauri kutenga asi ichiri kuratidza kukodzwa kwevatengi.
Pano iwe uchaona michina iyo Amazon shoppers ichaenda sezvipo. Icho chiratidzo chakanaka chevatengesi vakakurumbira mukati memakakatanwa emichemo akawanda emwaka, uye nezvezvinhu zvezororo.
Zvinetso zvakajairika nokutengesa kuAmazon
Vatengesi vanogona kuwana mari yavo mukati memavhiki akawanda
Kana ukatengesa zvinhu zvako kuAmazon, unofanira kutevera Amazon Seller kana Vendor Central zvinoda. Maererano navo, mubhadharo unogona kuitwa nekuisa zvakananga kubheji rako rekuongorora mazuva gumi nemaviri. Hapana humwe hurongwa hwekubhadhara unogona kushandisa paAmazon. Iwe unofanirwa kufungisisa nyaya iyi paunoronga bhizinesi rako rakati. Semuenzaniso, kana uri kushandisa mari kubva kune yako kutengesa kutenga zvitsva zvinotengeswa, zvinogona kuva chigumbuso chebhizimisi rako.
Mumazuva ano, hazvisi nyore kuva muuzaji weAmazon sezvazvakanga zvakaita kare. Kune zvakawanda zvevatengesi vanovhuna Amazon maitiro uye havauyisi purofiti pachikuva. Ndicho chikonzero Amazon yakave yakanyanyisa kubvumira vatengesi kutengesa zvinhu zvavo pachikuva. Vatengesi vanoda kutengesa zvipfeko, shangu, zvinhu zvemotokari uye mamwe marudzi ezvigadzirwa zvinodhura, vanoda kugamuchira kubvumirwa kubva kuAmazon.
Uchasangana nematambudziko pakuvaka purogiramu yemhinduro
Unofanira kunge uine nguva yakareba uye yakanaka yekutengesa kuti uwane zvikwereti zvakakwana kuti uenzane neAmazon SERP. Uyezve, zvinorambidzwa kukurudzira vashandisi kusiya mhinduro pamiti yako. Kana maAmazi akacherechedza kuti zvipfeko zvako hazvisi zvisikwa, zvose zvacho zvichabviswa uye iwe ucharasikirwa nehuwandu hwako.